संविधानका चार वर्ष : कति आशा कति निराशा ?
साेमत घिमिरे काठमाडाैं, ३ असोज
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली राजनीतिको निक्कै पुरानो सपना हो । यो सपनाको मूर्त रूप अहिलेकै संविधानले दियो । राज्यको उपल्लो तहलाई यस संविधानले पुनर्संरचना गर्यो, संघीयतामा लग्यो, गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्यो, समावेशितालाई स्वीकार गर्‍यो । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । यही उपलब्धिलाई मात्रै मानेर हामी खुशी हुन सक्ने ठाउँ भने छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा ठूलो भ्रम छ– हामीले नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक संविधान दान गर्यौं भनेर । नेतृत्वले जनतालाई संविधान दान गरेको छ । मानौं, जनताको कुनै भूमिका छैन, यो नेतृत्वको दान र कृपाले सम्भव भएको हो । नेतृत्व मख्ख छ, नयाँ संविधान दान गर्न पाएकोमा । नेतृत्वले बिर्सिएको छ कि यो नयाँ संविधानका लागि जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको कुरा । माओवादी जनयुद्ध होस्, मधेस विद्रोह होस् वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र अरू आन्दोलनहरूलाई पनि बिर्सिएजस्तो गरेर नेतृत्वले दान गरेको जस्तो सम्झन्छ । कृपा गरेको जस्तो सम्झिन्छ । यो संविधान निस्किएपछिको सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो यही हो ।
संविधान निस्किएपछिका कामहरू के के थिए ? नयाँ संविधान केका लागि चाहिएको थियो ? नयाँ संविधान कसलाई चाहिएको थियोजस्ता तमाम प्रश्नलाई नेतृत्वले कार्पेटमुनि लुकायो र भन्न थाल्यो– तिमी (जनता) हरूका लागि नयाँ संविधान दान गरेको छु । कृपा गरेको छु । जनतालाई नेताका कृपापात्रजस्तै गरी निरीह बनाइयो । जनताको सार्वभौमिकता संविधानमा जति उल्लेख गरिए पनि नेताको मनमस्तिष्कमा जनताको सार्वभौमिकताले प्रवेश नै पाएन ।
किन हामीलाई नयाँ संविधान चाहिएको थियो ? उत्तर सरल छ । विगतको संविधानको राज्यचरित्रमा प्रश्न थियो । हुने खानेहरूको ठूलाबडाहरूको नियन्त्रणमा राज्य थियो । राज्यको चरित्र ठालुहरूका लागि उपर्युक्त थियो र कमजोरहरूका लागि केवल शासन थियो । उपल्लो तहका समूहको मात्रै राज्यले स्वार्थ पूरा गथ्र्याे । त्यही भएर त्यो संविधानलाई जनताको आन्दोलनले फ्याँक्यो । यो संविधानको मूल मर्म राज्यको चरित्रलाई फेर्नु थियो । आज राज्यको चरित्र फेरिएको छ ? आज राज्य गरिबहरूको पक्षमा छ ? आज राज्य महिलाहरूको पक्षमा छ ? आज राज्य खान नपाउनेहरूको पक्षमा छ ? के राज्य सडकमा बस्नेहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सूची लामो बनाउन सकिन्छ । सोझो कुरा के हो भने नयाँ संविधानले राज्यको चरित्र फेर्न सकेन ।
नयाँ संविधान त आयो । परिवर्तन पनि भयो । तर, यसको दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तन नै भएन । हिजो जो राज्यबाहिर थिए, आज पनि बाहिरै छन् । हिजो राज्यभित्र थिए आज ती राज्यभित्रै छन् । पानी आउँदा वा चर्काे घाम लाग्दा होस्, यो राज्यरूपी छाताले सीमान्तकृतहरूलाई ओत दिन सकेन । सीमान्तकृतहरूलाई मेरो राज्य छ भन्ने अनुभूत गराउन सकेन । चार वर्षको अवधि संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले अत्यन्तै छोटो हो जानिन्छ तर संविधानको कार्यान्वयनको दिशा कता छ ? प्रश्न मूल त्यो हो । संविधानरूपी जहाज कता उडेको छ ? कुन विमानस्थलमा अवतरण गर्न खोजेको छ ? सीमान्तकृतको विमानस्थलमा कि ठालुहरूको विमानस्थलमा ? उत्तर सोझो छ विमानस्थलको दिशा मिलेको छैन । विमानस्थलको दिशा मिलेको भए आशा राखेर बस्न सकिन्छ । तर, अहिले दिशा मिलेको छैन, समस्या त्यहीँनेर छ ।
यो संविधानको अर्काे पक्ष संघीयता हो । बाहिरबाट हेर्दा संघीयता ठीकठाक छ । तीन तहका सरकार छन् । निर्वाचन भएको छ । कुनै परीक्षामा जाँच दिने हो भने नेपालको संघीयतालाई विद्यार्थीले राम्रै उत्तर दिन सक्छ । तर, अभ्यासमा हेर्ने हो भने, व्यक्तिको जीवनमा हेर्ने हो भने संघीयताले कहाँनेर मानिसलाई परिवर्तन दियो ? प्रश्न पेचिलो छ । संघीयतामा जानुको अर्थ राज्यपुनर्संरचना थियो । राज्यपुनर्संरचना भन्नुको अर्थ कर्मचारीको पुनर्संरचना, सेनाको पुनर्संरचना, सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना अथवा राज्यका यावत अंगहरूको पुनर्संरचना । पुनर्संरचना नगरीकन संघीयतामा गइयो, त्यसैले संघीयता अप्ठ्यारोमा परेको छ । संघीयतामा प्रदेशको अधिक महत्त्व हुन्छ । तर, आज प्रदेशहरू कामकाजी हुन सकेकै छैनन् । संघीयताको मूल मर्म के हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेशले पनि कानुन बनाउन सक्नु हो । स्थानीय सरकारलाई एकछिन छोडौं, प्रदेशको चर्चा गरौं ।
प्रदेश नं. २ संघीयता कार्यान्वयनका लागि कृयाशील देखिन्छ । प्रदेश नं. २ मा चाहिने कानुन जम्मा १ सय ६१ हुन् । तीमध्ये जम्मा १७ वटा मात्र पारित भएका छन् । प्रदेश नं. ५ मा चाहिने १ सय १६ कानुन हुन् । त्यहाँ जम्मा ४८ वटा मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणका हिसाबले प्रदेशहरूले किन काम गर्न सकेनन् ? केही त प्रदेशका कमजोरी पनि होलान् तर मूल कुरा मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन, प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन हो, जुन ढिला गर्यो वा केन्द्रले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण रह्यो । प्रदेशको स्वायत्ततालाई नै संघले आत्मसात् गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा कार्यक्रममा त भनिदिनु नै भयो– स्थानीय सरकार वा प्रदेश केन्द्रमातहत छन् ।
नेकपाकै अर्का अध्यक्षले प्रदेश नं. २ लाई भनिदिनुभयो– गाडीको गेयर अगाडि नबढाउनू दुर्घटनामा परौला । दुवै अध्यक्षको भनाइलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको संघीयताको कार्यान्वयन कुन चरणमा हुँदैछ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । नेकपाको मात्रै कुरा होइन, कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालालाई हिन्दु धर्म नभई भएको छैन । कसरी हुन्छ संविधानको सही कार्यान्वयन ? प्रश्न यहीँनेर अड्किएको छ । कागजी रूपमा संघीयतालाई व्यवस्थापन गरिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा अर्थात् नेतृत्वको मन र हृदयले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेकै छैन । संघीय सरकारको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि शासन गर्नु थिएन, आदेश गर्नु थिएन, खटनपटन गर्नु थिएन, सहजीकरण गर्नु थियो । तर, संघीय मानसिकता खटनपटनकै रह्यो । कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ दृष्टिकोण नै आएन । स्थानीय सरकार र प्रदेशको स्वायत्ततालाई संघीय बुटले मिचियो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एकपटक ठीकै बोले ‘के रोपेको के फल्यो ?’ भनेर । तर, प्रचण्डले केही खुलाएनन् । रोपेर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि बिरुवालाई झै हुर्काउनुपर्दछ । मलजल गर्नुपर्दछ । राजनीतिक व्यवस्थालाई हुर्काउने बेला छोराछोरीलाई जस्तो गर्नुपर्दछ । रोप्दैमा भइहाल्ने होइन, फलिहाल्ने होइन, मलजल, स्नेह, मायाममताको हेक्का भने प्रचण्डलाई छ कि छैन ? प्रश्न नै छ । प्वाक्कै एकपटक भन्नु र व्यवहारमा निरन्तर मलजलमा लाग्नु फरक कुरा हुन् ।
संविधान भूकम्पको थिलथिलोको बीचबाट जन्म भयो । अर्थात् त्यही बेला संविधान निर्माणका लागि सहमत भए । तर, संविधान ल्याउनुसम्म ठीक थियो होला । संविधान ल्याएकै बेला सबै नेताहरूले भनेका थिए– यो संविधानले मधेस समेट्न सकेन । मधेसले त काठमाडौंमा दीपावली हुँदा ब्ल्याकआउट गर्यो । एउटै देश एउटा संविधान आउँदा कहीँ उज्यालो भयो कहीं अँध्यारो भयो । नेताहरूले भने यो संविधान आधा हो, मधेसलाई संविधान संशोधनमार्फत् हामी सम्बोधन गर्दछौं । आज कहाँ गयो संविधान संशोधनको मुद्दा ? केले छेक्यो संविधान संशोधनलाई ? के मधेसलाई यो संविधानको अपनत्व चाहिँदैन ? आदिवासी जनजातिहरू भन्दै थिए– संघीयतामा हाम्रो थाकथलोको सुरक्षा गरियोस् । हाम्रो क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गरियोस् । हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई संघीयताको आधार मानियोस् । जनजातिको मुद्दा जहाँको त्यहीँ छ । मधेसको मुद्दा जहाँको त्यहीं छ । संविधान निस्किएका दिनपछि राजनीतिको प्रमुख काम संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु हो । स्वीकार्यता बढाउनका लागि के गरियो ? जुन संविधानले आधा भूगोल समेटेको छैन, जुन संविधानले एउटा सिंगो समुदाय समेटेको छैन ? मधेस बाहिर छ । जनजाति बाहिर छन् । यो संविधानको अपनत्व कोसँग छ ? यति सामान्य प्रश्नमा पनि हाम्रो राजनीतिले ध्यान दिन सकेन । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने राजनीतिक काम हो । त्यसलाई संविधान र कानुनले व्यवस्थापन गर्ने हो । तर, त्यो दिशातिर पाइला नचाल्नु आफैंमा ठूलो अनौठो हो ।
माथिल्लो तहका परिवर्तन र मौलिक हकले यो संविधानको सुन्दरताको व्याख्या गरिँदैछ । फलानो देशको संविधानभन्दा हाम्रो देशको संविधान राम्रो हो । लोकतन्त्र भनेको केवल कानुनी मात्रै कुरा होइन, यो आचरण, प्रवृत्ति र संस्कृतिको कुरा पनि हो । त्यस्तो आचरण, प्रवृत्ति र संस्कृति कतै नदेखिनु तर अरू देशको भन्दा राम्रो भन्दै हिँड्नु हास्यास्पद कुरा हो । जति बेला नेताले मौलिक हक, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता दान गरेको प्रवचन दिन्छन्, त्यतिबेला मलाई एउटा ओशो रजनिशको कथा सम्झना आउँछ । रजनीशको कथामा एक जना पात्र छन् मुल्ला नसुरुद्दिन । नसुरुद्दिन एक दिन शहर आए र कलेजो फ्राइ खाएछन् । गाउँमा खसीको मासु सबै भाग लगाएर खाने प्रचलन । कलेजो मात्रै उनले खाएकै रहेनछन् । कलेजो उनलाई निकै मीठो लाग्यो ।
आफ्नी श्रीमतीलाई पनि कलेजो खुवाउने विचारले कलेजो पकाउने कुकलाई बोलाएर कलेजो पकाउने तरिका टिपे, कुकले भन्यो कराइ बसाउने, तेल हाल्ने, थोरै प्याज हाल्ने, कलेजो हाल्ने, मसला हाल्ने भुट्ने । कुकले पकाउने विधि बतायो । उनले एक नम्बर दुई नम्बर गरेर टिपे । कलेजो पकाउने तरिका २२ बुँदामा बनेछ । २२ बुँदा टिपेको कागज उनले स्टकोटको गोजीमा राखेर खसीको मासु पसलमा गए । १ किलो कलेजो किनेर उकालो बाटो लागे । बीचबीचमा उनले स्टकोटमा राखेको कागज छाम्छन् । उनलाई ठूलो डर छ, कागज हराउँछ कि भनेर । उकालो बाटो थियो चौतारामा कलेजो छेउमा राखेर बसे । एउटा चील आयो । कलेजो टपक्कै टिपेर लग्यो चीलले । नसुरुद्दिनले हत्त न पत्त स्टकोटको गोजीमा कलेजो पकाउने तरिका लेखेको कागज लिएर भनेछन्, ‘मुर्ख चील, कलेजो लगेर के गर्छस् ? कलेजो कसरी पकाउने भन्ने कागज त यहीँ छ ।’ अब कलेजै छैन, नसुरुद्दिनलाई कागजले के गर्ने होला ? कलेजो चीलले लिइसक्यो, कागज समाएर के गर्ने होला ? कतै नेपालको संविधान नसुरुद्दिनको कलेजो चीलले लगेपछिको कागज त हुँदैन ? अहिले मुख्य ठूलो पीर यहीँनेर छ ।
यो अवधि संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने हिसाबले छोटो हो, त्यो बुझ्न सकिन्छ तर आधारभूत दृष्टिकोणमा देखिएका समस्याहरू राजनीतिक रूपमा देखिएका विचलनहरू भने यो संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो व्यवधान हो । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि मोहनविक्रम सिंह, कमल थापा, बिप्लवहरू अप्ठ्यारो होइन, अप्ठ्यारो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमै छ । अप्ठ्यारो नेकपा र नेपाली कांग्रेसमै छ । वैचारिक अप्ठ्यारो नफुकाइकन र राजनीतिक बाटो नफेरीकन यो संविधानमाथि न्याय हुन सक्दैन । यो संविधानको स्वामित्व नेपाली जनतामा हस्तान्तरण हुन सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६, २२:१२:००
साम्राज्यवादी मारमा स्यार्पुतालका माछा
कहिले बुझ्ला काठमाडौंले मेलगैरीको मर्म ?
खोजेको गणतन्त्र र भोगेको गणतन्त्र
नेताले बिर्सेको,जनताले सम्झेको